चार कोठे घर बनाउन कहाँ कस्तो छड प्रयोग गर्ने? कति लाग्छ खर्च? :: Setopati
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, फागुन १६
सहरी क्षेत्रमा फलामे छड बिना घर कमै बन्छन्। छडलाई घरको बलियोपनसँग जोडेर हेरिन्छ। यसो भनिरहँदा धेरै छड प्रयोग गर्दैमा घर बलियो हुने पक्कै होइन।
त्यसो भए घर बनाउन कहाँ–कहाँ कस्तो डन्डी कति प्रयोग गर्नु आवश्यक छ?
यसबारे हामीले निर्माण कम्पनी 'बिल्ड इनोभेसन'का निर्देशक तथा बिल्डिङ विशेषज्ञ इञ्जिनियर सुवास अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौं।
उनका अनुसार पहिले त कस्तो किसिमको, कति तले, कति कोठे घर बनाउने हो निश्चित हुनुपर्छ। डिजाइनले धेरै कुरा प्रभाव पार्ने भएकाले सोहीअनुसार इञ्जिनियरसँग छडबारे पूर्ण जानकारी लिनुपर्छ।
तर कुनै घर बनाउँदा 'एमआरटी' (म्यान्डेटरी रूल अफ थम) पूरा हुन्छ भने डन्डीको मात्रा हिसाब गरिरहनुपर्दैन। यो भनेको घर बनाउने ठाउँको क्षेत्रफल यति, यस्तो संरचना लगायत कुरा पहिल्यै निश्चित गरिएको मापदण्ड हो। यो मापदण्ड पूरा भएका घरमा के-कति छड लाग्छ भनेर पहिल्यै अनुमान गर्न सकिन्छ।
'अनिवार्य भनिएको नियममा आवश्यक कुरा हेरफेर गर्न मिल्दैन। यो नियमअनुसार घर बनाउँदा पास गर्न पनि सजिलो हुन्छ,' अधिकारीले भने, 'घरको डिजाइन, मोहोडा हेरफेर गर्नुपरे सोहीअनुसार डिजाइनरले आवश्यक ठाउँमा छड थप्ने र अनावश्यक स्थानमा कम गर्ने सुझाव दिन्छन्।'
यहाँ हामीले 'एमआरटी' अपनाएर बनाइने घरबारे नै कुरा गरेका छौं। यो नियम पूरा हुन केही आधारहरू हुन्छन्।
पहिलो, घरको जम्मा क्षेत्रफल एक हजार वर्गफिटभन्दा कम हुनुपर्छ। साधारणतया आवासीय घर यही क्षेत्रफल आसपास बन्छन्।
दोश्रो, दुइटा पिलरबीचको दूरी १४ फिट ९ इन्चभन्दा बढी हुनु हुँदैन।
अर्को भनेको छतको क्षेत्रफल हो। यहाँ चार वटा पिलरबाट बनेको क्षेत्रफल १४४ वर्गफिटभन्दा कम हुनुपर्छ।
'माथिका तीन कुरा मिलेको अवस्थामा संरचनागत मूल्यांकन नगरी छड तथा डन्डीको मात्रा अनुमान गर्न सकिन्छ,' अधिकारीले जानकारी दिए।
यी नियमलाई आधार बनाउँदा हामीले घरको जगदेखि जानकारी लिनुपर्छ।
सामान्यतया जग राख्दा तल्लो बिममा १२ मिलिमिटर (मिमि/एमएम) को डन्डी प्रयोग हुन्छ। यो बिम घरको जगसँगै हुन्छ। पिलरका लागि भने १६ मिमि र १२ मिमिको डन्डी मिलाएर राख्नुपर्छ।
मुख्य डन्डीहरूलाई ८ मिमिका छडले बाँधिएको हुन्छ। जसलाई निर्माणको भाषामा रिङ वा चुरी भनिन्छ।
अर्को, डिपिसी वा प्लिन्थ बिमको कुरा आउँछ। यहाँ कम्तीमा १२ मिमिको डन्डी राख्नैपर्ने नियम छ। त्यस्तै भर्‍याङमा पनि १२ मिमिकै राख्नपर्छ।
'यी आकारका डन्डी मात्रा मिलाएर प्रयोग गर्नेबारे भने इञ्जिनियरले नै बताउनेछन्,' अधिकारीले भने, 'कहाँ कति राख्ने भन्ने कुरा प्राविधिक हो, यसै भन्न मिल्दैन।'
झ्यालको तल र माथि पनि डन्डी राख्नुपर्छ। नियमअनुसार यहाँ कम्तीमा १० मिमिका डन्डी हुनुपर्छ। अनि छतमा राखिने डन्डीको कुरा आउँछ। यहाँ अझै ध्यान दिनुपर्ने अधिकारी बताउँछन्।
'छतको पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसो त सबै आवश्यक छन् तर छतमा सानो खराबीले सधैंभरी समस्या निम्त्याउन सक्छ,' उनले भने, 'यहाँ कम्तीमा ८ मिमिको डन्डी राख्नुपर्छ। तर उपभोक्ताले थप मजबुतिका लागि ८ र १० मिमिको मिश्रण तयार पारेका हुन्छन्।'
अब एक हजार वर्गफिटमा बन्ने चार कोठाको एक तले घरमा कति छड लाग्छ?
कुनै पनि संरचना बनाउँदा त्यसमा राखिने पिलर, भित्रको पर्खाल आदिले छडको लागत निर्धारण हुने इञ्जिनियर अधिकारी बताउँछन्।
अहिले विभिन्न कम्पनीहरूले ७७ रूपैयाँदेखि ८१ रूपैयाँसम्म प्रति किलो कारखाना मूल्य कायम गरी बजारमा डन्डी पठाइरहेका छन्। माथिको अनुपातलाई हालको मूल्यसँग तुलना गर्दा एक हजार वर्गफिटभन्दा कम क्षेत्रफलमा बन्ने एक तले घरका लागि करिब चारदेखि पाँच लाख रूपैयाँ छडमा खर्च हुन्छ।
घर बनाउँदा कस्तो छड रोज्ने? किन्दा हेर्नैपर्ने कुरा के-के हुन्?
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १६, २०७७, ०८:०७:००